နည်းနည်းပြောပြပါ - MYSTERY ZILLION
November 2010 edited February 2011 in DTP
microsoft excel formular လေးတွေ ပြောပြကြပါဦး
????? ကောင်းလိုက်တဲ့မေးခွန်းဖြေစရာအဖြေမရှိလို ့
=IF(question=clear, "perhaps", "press F1 key in Excel")
ဘာအတွက် ဖော်မြူလာလိုချင်တာလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးရင် သိတဲ့သူတွေ၀င်ဖြေပေးလိမ့်မယ်အကို။
mr.moeyake ပြောတဲ့ =IF(question=clear, "perhaps", "press F1 key in Excel") ကလည်း excel ရဲ့ အသုံး၀င်တဲ့ fomula တစ်ခုပဲလေ ...
သူရဲ့ syntax က ဒီလို
logical_test ဆိုသည်မှာ မှန်လား၊ မှားလား စစ်ခြင်းပဲ ဒီမှာ ကျောင်းသား စာမေးပွဲ ဇယားတစ်ခုနဲ့ နမူနာ ပြပါမည်။
Excel မှာ Formula စရေးတော့မယ် ဆိုရင် ရှေ့က = ခံပြီး ရေးလို့ ရပါပြီ
Name --- - Myan -- Eng ---Maths
1 Ma Ma --85
274 --- 91.33 ---Pass
2 Mg Mg --52
186 ----67.00 ---Fail
3 Mu Mu --80
180 ----60.00 ---Pass
>> ပထမ Total အတွက် ဘာသာရပ် တစ်ခုချင်းစီကို ပေါင်းပါမယ် ...
ပေါင်းချင်တဲ့ cell ကွက်များကို ရွေးပြီး Autosum button ကို နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့တင် Total ကို ရနိုင်ပါတယ် ...
ဒါပေမဲ့ အခုက ကိုယ်ပိုင် formula ကို သုံးချင်တဲ့ အတွက် Autosum ကိုမသုံးဘဲ
Formula ရေးပါမယ် ... အဖြေလိုချင်သော Cell ကွက် E1 ကို ရွေးပါ ...
=sum( လို့ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ B1 ကနေ ပေါင်းချင်တဲ့ cell ကွက် ဖြစ်တဲ့ D1 ထိ ရွေးလိုက်တာနဲ့ B1:D1 ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. အဲနောက် ) ပိတ်ပြီး
enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပထမ row ဖြစ်တဲ့ Ma Ma အတွက် သုံးဘာသာပေါင်းကို E1 မှာ ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
နောက် Student တွေ အတွက် လိုချင်ရင်တော့ E1 ကနေ Autofill ဆွဲချလိုက်ရင် ရပါပြီ ....
အကယ်၍ =sum ကိုမှ မသုံးချင်လျှင်
= အရင်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး cell ကွက် တစ်ကွက်ချင်းဆီကို နှိပ်ရွေးပြီး + ကိုသုံးသွားရင်လညး် ရပါတယ် ...
(+) လိုပါပဲ [-(substration),/(division),*(multiplication)] များကိုလည်း လိုအပ်သလို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ် ....
>> ဒုတိယ အနေနဲ့ ဘာသာရပ်တွေအတွက် Average ကို တွက်ကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
>> တတိယ က အောင်မြင်လား၊ ကျရှုံးလားကို စစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ... IF formula သုံး၍ရေးပါမယ် ... အဖြေရေးချင်တဲ့ F1 cell ကွက်ကိုရွေးပြီး
အဲ Formula ထဲမှှာ အပိုင်း ၃ ပိုင်းပါ၀င်ပါတယ် ...
၁။ OR(C2<50,D2<50,E2<50) အပိုင်းကတော့ logical_test ဖြစ်ပါတယ် ...
၂။ နောက် "Fail" အပိုင်းကတော့ logical_test မှန်ရင် ပေါ်မယ့် Data ဖြစ်ပါတယ် ...
၃။ နောက် "Pass" အပိုင်းကတော့ logical_test မှားရင် ပေါ်မယ့် Data ဖြစ်ပါတယ် ...
OR(C2<50,D2<50,E2<50) ဆိုလိုတာက C2 (သို့မဟုတ်) D2 (သို့မဟုတ်) E2 များထဲမှ တစ်ခုခုသည် 50 ထက်သာ ငယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် "Fail" ပေါ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ OR ကို မသုံးဘဲ AND နဲ့ စစ်ချင်လျှင်လည်း ရပါသည်။
AND ရဲ့ သဘောတရားကတော့ C2,D2,E2 သုံးဘာသာစလုံးက 50 နဲ့ညီ(သို့မဟုတ်)ကြီးမှသာလျှင် "Pass" ဖြစ်စေပြီး ဘာသာရပ် တစ်ခုခုကသာ 50 ထက် ငယ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် "Fail" ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
Excel မှာ Formula အများကြီးရှိပါတယ် ... Help ကို ဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ ကို phowkaw လိုအပ်သလို တွက်ချက်လို့ ရပါလိမ့်မယ် ....
မှတ်ချက် (---- လေးများကို သည်းခံစေလိုပါသည်။ ကြည်ဖြူ ပုံတင်၍ ပြချင်သော်လည်း ပုံတင်တာ အဆင်မပြေ၍ Data များကို --- လေးများဖြင့် ခြားပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည် )
ဲဲဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် excel ရဲ့cell အကွက်တစ်ကွက်မှာ ( = )ညီမျှခြင်း ချလိုက်ပြီး (a) စာလုံးရိုက်လိုက်တာနဲ့ function အမှတ်အသားလေးတွေရဲ့ တစ်ခုခြင်း အသုံးကို နမူနာနဲ့ တကွ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ် ၊၊
မေးထားတာ တပါတ်ပြည့်တော့မယ် ။
ဖြေမဲ့သူ မရှိတဲ့ နေရာမှာ ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲ ။
ချောင်းဟန့်သံတောင် မကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်လွန်းတယ် MZ ရယ်။
ခင်ဗျား သိချင်တဲ့ Excel functions လေးတွေကို အခြေခံကစပြီး flash ဖိုင်လေးတွေနဲ့သေသေချာချာ သင်ပြပေးထားပါတယ်။
အရမ်း ကောင်းတဲ့ site လေးပါ ခင်ဗျာ။
ကြာတော့ တော်တော်ကြာနေပါပြီ။ ကျွန်တော်က အခုမှ ဝင်ကြည့်မိလို့
ညွှန်းထားတဲ့ site ကတော့ link မရ ေတာ့ဘူး